तिलोत्तमामा चोरीको घटना बढ्यो, नयाँमिलमा पैसासहित ३ तोला सुन र आईफोन चोरी ! – On Khabar
अर्थ गृहपृष्ठ प्रमुख समाचार समाचार
तिलोत्तमामा चोरीको घटना बढ्यो, नयाँमिलमा पैसासहित ३ तोला सुन र आईफोन चोरी !
February 4, 2019 February 4, 2019 onkhabar	Comment(0)
बुटवल माघ २१
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगपालिका वडा नम्बर ५ रुद्रपथ निवासी सुवास खरेल को घरमा चोरी भएको छ ।
तिलोत्तमा नगरपालिका नयामिल नजिकै रहेको घरमा कोही नभएको मौका छोपी घरको मूल ढोकामा लगाएको ताल्चा फोरेर चोरी भएको हो ।
चोरले घरको मुल ढोका कोठाको ढोका समेत फोरेरको तथा कोठामा रहेका दराज र बक्स प्लङक फोरेर करिव ३ तोला सुन १ थान आइफोन र अन्दाजि ५र७ हजार चोरि भयको सुवास खरेल बताए । घर धनि आफ्न्त को मा गयको कारण करिव १० दिन बन्द थियो सोहि समय घरमा कोही नभएको अवस्थामा चोरी भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ । चोरि भयको सुचना को खबरपाउन साथ बुटवल इप्रका र मङ्गलापुर बाट प्रहरि आयको थियो । चोरि भयको घरमा पुरानो कम्मल भेटियको हुदा चोर हरु कम्मल ओडेरै आयको र भाग्दा छोडेको अनुमान लगायको छ । चोरीको प्रकृतिलाई मध्ये नजर गरेर अनुसन्धान गरिने रुपन्देही जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक ह्दय थापाले बताए । उनले यथासम्भव चाडै चोर पत्तालगाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए । केहिदिन अगाडी सोहि क्षेत्र मा पत्रकार यमलाल भुसालको घर समेत चोरि भयको थियो ।
Banner News अन्तर्वार्ता अर्थ खेलकुद गृहपृष्ठ प्रमुख समाचार प्रवास बिचित्र संसार बिज्ञान/प्रबिधी भिडियो मनोरन्जन यौन/स्वास्थ्य राजनीति राशिफल शिक्षा समाचार
यसरी गरिँदैछ कर्मचारी समायोजन
December 15, 2018 December 15, 2018 onkhabar
काठमाडौं– कर्मचारी समायोजनका लागि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि यो प्रक्रिया अघि बढेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित सेवा प्रदायक सरकारी निकायमा कर्मचारीको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ भने निजामती कितावखानामा पनि कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गर्न भनेको छ । साथै मन्त्रालयले पनि कर्मचारी सरुवाको काम रोकेको छ । […]
Banner News गृहपृष्ठ प्रमुख समाचार राजनीति समाचार
प्रदेश ५ गाडी खरिद प्रकरण : नियम सहि नियत गलत !
January 20, 2019 January 20, 2019 onkhabar
अनखबर ६ माघ, बुटवल । लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै ४३ वटा गाडी खरिद गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । तर नियमअनुसार नै किनिएका गाडीहरु खरिदमा नियतमा भने खोट देखिएको हुनसक्ने भन्दै अध्ययनको लागि थप समय मागिएको छ । प्रदेश ५ को प्रदेशसभा र विभिन्न मन्त्रालयका लागि खरिद गरिएका गाडीको […]
Banner News गृहपृष्ठ प्रमुख समाचार समाचार
काठमाडौं बसेर दुर्गमको तलब खान्छन् डाक्टर !
November 15, 2018 onkhabar
बागलुङ २९, कात्तिक। धौलागिरीका चार जिल्लालाई केन्द्रित गरेर स्थापित धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङमा १५ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ। तर, अहिले मुस्किलले मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट एक र अर्का एक गरी दुईजना स्थायी र तीनजना करारमा कार्यरत छन्। अन्य १० जनाको रिक्त दरबन्दी परिपूर्ति गर्न अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समितिलाई निकै सकस छ। कारण दरबन्दी अनुसार धौलागिरी […]
बुटवलमा कृषि मेला सुरु, किसान देखिएनन : मुख्यमन्त्री पोख्रेल !
वाइडबडी विमानमा अर्काे घोटाला : किन्दा ४ अर्ब, मर्मत गर्दा कति भ्रष्टचार ?
यसरी रच्यो क्रिकेटमा नेपालले ईतिहास, बधाई को ओईरो !
युरोप जाने सपनामा हुनुहुन्छ, : युरोपमा नेपाली युवाहरु बन्धक हुन बाध्य !
स्याङ्गजामा नेकपाको स्ंगठन विस्तार तीव्र, दुई हप्तामै ३३ कमिटि निर्माण !
नेकपाका विद्यार्थी नेतालाई प्रहरीको फसाउने षडयन्त्र ! हुदैं नभएको गोली प्रहरीले कहाँबाट भेटायो ?
लुम्बिनीका यि जिल्लाहरुमा भए एनसेल विरुद्ध कार्यक्रम ! हेर्नुहोस् कहाँ कुन नेताले के भने ?
एनसेलसँग नेताले व्यक्तिगत लाभ उठाए तर सरकारले कर उठाएन : रुपा बुढा
Kathmandu , Nepal Email: info@onkhabar.com onkhabar@gmail.com Phone: +977-1-000000 Web: www.onkhabar.com
Editor - shiva New Reporter - Content Writer - Content Writer -
©2018 onkhabar.com All rights reserved ||